Shirkadda DP World oo maanta si rasmi ah loogu wareejin doonno maamulka dekedda Berbera (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Shirkadda DP World oo maanta si rasmi ah loogu wareejin doonno maamulka dekedda Berbera (DHAGEYSO)
Waxaa maanta oo Khamiis ah la filayaa in shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ay si toos ah ula wareegto dekadda magaalada Berbera ee maamulka Somaliland.
Munaasabad kooban ayaa lagu waddaa in maanta lagu magaalada Berbera, iyadoona munaasabadaasi ay ka qeyb gali doonaan madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo mas’uuliyiin ka socota shirkadda DP World.
Wasiirka Ganacsiga iyo Maalgashiga ee maamulka Somaliland Cumar Shuceyb Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay heshiiska maanta la hirgelinayo, isagoona sidoo kale sheegay in shirkadda DP World ay la wareegtay shaqaalaha cusub ee .
“Shirkadda DP World ee Berbera maanta ayay si rasmi ah ula wareegaysaa maamulka dekedda Berbera, waxayna shaqada halkaasi ka bilaabatay 1-da bishii Maarso, waxaa jiro cabasho ka imaanaysa shaqaalaha dekedda, balse shirkadda waan ka wada hadalnay arrinkaasi, waxaana wax weyn iska bedalay mushaaraadka la siin jiray shaqaalaha” Sidaas waxa yiri wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga maamulka Somaliland Cumar Shuceyb Maxamed.
Dhinaca kale, shacabka reer Somaliland ayaa horey madaxda maamulkooda ugu eedeeyay inay ku fashilmeen hoggaaminta dalka, waxayna sheegeen inay kasoo horjeedaan heshiisyada lala galaayo shirkadaha ajaanibta ah oo ay ka mid tahay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Sanadkii hore ayay aheyd markii shirkadda DP World iyo maamulka Somaliland ay heshiis ku kala saxiideen magaalada Abu Dhabi, kaas oo ku saabsanaa in muddo 25 sano ah maamulka dekedda Berbera lagu wareejiyo shirkadaasi.